Fankalazana ny faha-5 taonan’ny fikambanana mpanao Karate eo anivon’ny Fandraharahana ny Fonja.
Published Date: 4 juin 2022
📸 Pejy an-tsary 04 Jona 2022.
🥋Fankalazana ny faha-5 taonan’ny fikambanana mpanao Karate eo anivon’ny Fandraharahana ny Fonja.
🎉Tontosa anio 04 Jona 2022 ny fankalazana ny faha-dimy taonan’ny mpiangaly ny haiady Karate eo anivon’ny Fandraharahana ny fonja. Tao amin’ny trano malalaky ny E-media Ampasanimalo izany.
⭐Nanasa ireo mpiangaly haiady hafa eo anivon’ny Fandraharana ny Fonja tahaka ny Kung-Fu sy ny Kick boxing ary koa ny mpiangaly haiady karate avy amin’ny Antenimierampirenena­.
🔱Tonga nanome voninahitra sy nisolotena ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja ny Tale mpiandraikitra ny fiarovana ny Fonja (DSEP) eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana.